Dubai Delight | Uhambo lweSizwe kunye nePhahla leeholide
Iimpawu ze-04 / iintsuku ze-05
| Ikhowudi yoKhenketho: G-5020
Xa ufika kwi-Airport International Airport, uya kuhanjiswa kwihotele yakho ngummeli wethu.
Ukungena kwihotele, phumula uze uchithe lonke ixesha lokuzonwabisa.
Intloko ngaphandle kwehotele kusihlwa kwaye ukhangele iindawo zokuthengisa. Ukuba ufuna amava e-Emirati, tyelela enye yeesobho ezininzi zaseBur Dubai. Kwakhona kufuphi neBastakia Quarter yembali eyaziwayo nezindlu zayo zendabuko kunye nezindonga zomoya.
Ukutya isidlo e-Indian restaurant
Ngobusuku ku hotele.
Emva kwesidlo sakusasa uzalise uhambo lwesigxina somzi. Ukutyelela kukusa kwi-Bur Dubai Creek, i-Market ye-Spice. Unokumisa isithuba-I-Stop neBurj al-Arab, ihotele ye-7 yehlabathi kuphela. Ukusuka apha uhamba waya kumntu owenziwe i-Palm Island kunye nenkazimulo yayo, i-Atlantis i-Palm Hotel. Ingongoma ephakamileyo yezokhenketho ngokuqinisekileyo i-Mosque emhlophe i-Jumeirah. Nceda uqaphele ukuba akufanele ugqoke iifutshane, umva kunye neengalo kufuneka zifakwe kwaye abafazi kufuneka bafake iintloko zabo nge-headcarf. Kulo khenketho uza kuhanjelwa nezindlu zakudala zase-Arabia kunye nezakhiwo zabo zendalo.
Ngobusuku uya kuqhuba iDhowhow cruise kwi-Dubai Creek. AmaDhows ayenqanawa yaseArabhu e-Arabhu ahlale engatshintshi kangangeenkulungwane. I-cruise inikeza umbono ohluke kakhulu kwi-Dubai. Ngakolunye uhlangothi nguDeira, okwakungenxa yeenjongo zonke, yonke idolophu yase Dubai ukuya kwi-1990. Ngakolunye uhlangothi iDubai yanamhlanje kunye neendlela zayo ezibanzi kunye nezobugcisa eziphezulu. Ukutya (i-buffet) kuya kuba sekhompini.
Yiba nesidlo sakusasa esiphumeleleyo oza kuphumla ehotele yakho njengoko unentsasa ekuphumuleni.
Ngemva kwemini, uqala iDaert Safari yakho. Uthunyelwa entlango. Hlala emva kwaye ujabulele indlela izithuthi ezinyuka ngayo iindunduma ezingenamanzi. I-Dune-bashing, ukuba uthanda! Jonga ilanga liye lihla ngaphaya kommandla ophezulu kwi-dune. Ukushona kwelanga lokukhanya kwelanga kunokwenza umqolo ogqithiseleyo kwiifoto ezininzi zeentsapho ezingakhohlwayo. Ukuba inqwelo ye-swanky ibonakala ikhoyo namhlanje, thabatha inkamela. Unokuzibandakanya kwiindawo zokwakha i-henna kwaye u-sheesha. Isidlo sakusihlwa siya kunikwa phantsi kwesibhakabhaka sase-Arabhu esineenkwenkwezi ngenkathi umdanso wesisu ehamba nawe. Njengoko kusihlwa okumangalisayo kufike ekupheleni, uyabuyiselwa ehotele yakho
Namhlanje, emva kwesidlo sakusihlwa, unalo lonke usuku lokuzonwabisa.
Nangona kunjalo, sikhuthaza ukuba uthathe leli thuba ukutyelela iBur Khalifa, isakhiwo esona side kunazo zonke ehlabathini. Yibize ukuba iyamangalisa okanye ibambelele, akukho nto inokuphika ukuba uBurj Khalifa ngumhlaba oqhekezayo wobugcisa kunye nobunjineli. Isakhiwo esikhulu kunazo zonke zehlabathi esibetha esibhakabhakeni kwi-828m (amaxesha asixhenxe ubude beBig Ben) kwaye savuleka ngo-4 uJanuwari 2010, kwiminyaka emithandathu kuphela emva kokuqalisa ukumba. Ukufikelela kwabasebenzi be-13,000 basebenze imini nobusuku, ngamanye amaxesha bafaka umgangatho omtsha kwiintsuku ezintathu. Umtsalane oyintloko nguDeck Observation 'Phezulu' kwi-124th floor. Ukususela kwiindawo eziphakamileyo ezinokuthi ungabhekisela ngokulula kwiLizwe, iindawo ezintathu zePalm kunye nezinye iziganeko. Ukufika apho kudlula imiboniso eyahlukeneyo ye-multimedia kwi-ascending-lift ephakamileyo ekwazisa i-10m ngesibini ngomzuzu wonke ukufikelela kwi-124 kwi-442m ephezulu emoyeni. Ekupheleni khenketho, buyela ehotele yakho
Emva kwesidlo sasekuseni, hlola ehotele. Uya kuthunyelwa kwisikhululo sezindiza ukuze ugibele umqhubi wakho ekhaya.
Buyisela i-airfare airfare kwi-airline ye-Indigo
Iimpawu ze-4 / iintsuku ze-05 zokuhlala
Iindleko ze-visa ze-UAE zifakiwe
Ingaba ukuhlawula iirhafu
Ukubuyela kwiiyunivesithi kwi-SIC (isihlalo kwi-Coach)